Nandeha niaraka tamin'ny ankizy ~ Journey-Assist - Torohevitra, triketsika, hack hack
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Miara-mandeha amin'ny ankizy izahay
Torohevitra momba ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny ankizy.
Na inona na inona, Baby, mahafinaritra foana izany. Ary etsy andaniny, ny zaza iray amin'ny dia iray dia antony voafetra be, ary amin'ny lafiny iray, loharanom-pifaliana tsy azo ihodivirana ihany koa, ary koa ohatra faran'izay tsara sy mahomby amin'ny fomba fijerena an'izao tontolo izao
Aza hadino torohevitra avy amin'ny dokotera, fa ny tontolo iainana antonony indrindra amin'ny zaza dia izy no ampiasainy.
Noho izany, aza manararaotra ny dia mandeha any amin'ny faran'izao tontolo izao, ary mba hisorohana ny acclimatization sarotra sy ny acclimatization mifanohitra rehefa miverina any an-tanindrazanao ianao, dia manoro hevitra ny sidina manomboka amin'ny fahavaratra mankany amin'ny fahavaratra, na avy amin'ny ririnina ka ririnina.
Tena zava-dehibe izany raha tsy nomanina ela ny dia. (hatramin'ny roa herinandro). Koa satria ny zaza dia tsy manam-potoana mba acclimatize.
Raha manidina miaraka amin'ny ankizy iray any amin'ny firenena sivilizasiona na malaza mpizaha tany ianao, dia tsy tokony haka sakafo isam-bolana sy ny diaper ianao, afaka mividy izany rehetra izany eny an-toerana. Ho an'ny zaza iray dia ampy ny hahazoana fitafiana ampy ho an'ny vanim-potoana, sakafo ho an'ny fotoana eny an-dàlana ary feno "filana" foana. kitapo fanampiana fanampiana (raha mila fanazavana fanampiny momba ny kitapo fanampiana voalohany, jereo ny tabilao mifanentana amin'ity pejy ity).
Manoro hevitra izahay fa haka tapakila ho an'ny sidina amin'ny alina (na mihetsika) mba hialana amin'ny fitsangatsanganana mahafinaritra.
Avelao matory am-pitoniana ilay zaza ary hankafy ny nofy mamy amin'ny fotoana mahazatra, fa tsy fitadiavana mivezivezy fotsiny, mba hampialany ny tenany ao anatin'ny habaka fiaramanidina voafetra na fiaramanidina 🙂.
Raha misy tahotra sao hahatratra otrikaretina ny zaza (ohatra, any amin'ny firenen'i Azia Atsimo Atsinanana na Afrika na misy nosy) dia tadidio.
Ny bakteria na aiza na aiza. Ary mila miatrika azy ireo ianao na aiza na aiza fomba mitovy - mitandrina ny fitsipika momba ny fahadiovana, ary aza avela handeha any amin'ilay toerana atahoranao ny tenanao :) ilay zaza.
Raha matahotra ianao fa mifidy ny zanakao ka tsy holaviny sakafo eo an-toerana, dia tsaroanay fa any amin'ireo fivarotana ny firenena mandroso be mpizahatany dia afaka mahita izay rehetra mahazatra anao mihinana ny zanakao.
Saingy, tadidio fa lehilahy tsy dia manadihady loatra ilay zaza, ary azo antoka fa hahaliana ilay vao hitany fa mihinana ao amin'ny sakafo ao an-toerana misy ny mpampiantrano azy.
Tena zava-dehibe izany. Tokony hihinana tsy tapaka ny ankizy, manangona tsiranoka ampy ary matory be.
Aza mahazo zanakao amin'ny toerana hanesorana anao amin'ireto.